OPPO A11: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabida rasmiga ah | Androidsis
Qadka dhexe ee OPPO ayaa si cad usii xoogeysanayay todobaadyadan. Astaantu waxay nooga tagtay moodallo badan qaybtan suuqan, sida A11xama kan K5, ayaa la soo bandhigay usbuucii hore. Hadda waa marki taleefanka cusub ee qaybtan, oo ah OPPO A11. Telefoonkan cusub waa nooc ka mid ah A11x dhowr toddobaad ka hor.
OPPO A11-kan cusub wuxuu hayaa qeyb ka mid ah qaabeynta iyo qeexitaanka taleefanka aan baranay dhowr toddobaad ka hor. In kasta oo aysan si sax ah isku mid u ahayn, maxaa yeelay waxaan sidoo kale arki karnaa in soo-saaruhu uu ku sameeyay is-beddelo taxane ah. Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo hoose.
Ku saabsan naqshadeynta wuxuu hayaa heerka ugu sarreeya qaab dhibic biyo ah, laakiin wax yar oo oval ah, oo aan ku arki karnay qaabkii hore. Shaashadda dhinaca ee shaashadda sidoo kale aad ayey u khafiifsan yihiin, si loogu isticmaalo si wanaagsan xagga hore. Afar kamarad ayaa nagu sugeysa gadaasha taleefanka, marka lagu daro dareeraha sawirka faraha.
1 Qeexitaannada OPPO A11
Qeexitaannada OPPO A11
Waan arki karnaa tan OPPO A11 waa taleefan wanaagsan oo dhex-dhexaadka ah. Waxay la timid qeexitaanno aad isugu dheellitiran dareenkan, iyadoo si gaar ah loogu fiirsanayo kaamirooyinkeeda, oo leh afar kamaradood oo gadaal ah iyo bateri na siinaya is-maamul-wanaagga wanaagsan. Marka mabda 'ahaan waxay leeyihiin wax walba oo ay ku jeclaadaan wax badan dadka isticmaala suuqa, gaar ahaan maadaama ay qiimo wanaagsan ku yeelan doonto lacagta. Kuwani waa faahfaahinta buuxda ee taleefanka:
Shaashad: 6,5 inch IPS LCD leh HD + xallinta
Kaydinta gudaha: 128 GB (Waa la ballaarin karaa kaarka MicroSD)
Kaamirada gadaal: 12 MP oo leh fure f / 1.8 + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Kaamirada hore: 8 Xildhibaan
Nidaamka hawlgalka: Android 9 Pie oo leh midab OS 6
Isku xirnaanta: GPS, GLONASS, WiFi 802.11 a / c, Bluetooth, Dual SIM, 4G / LTE
Qaar kale: Akhristaha sawirka faraha gadaal, kuwa ku hadla Stereo
Kaamirooyinka ayaa suurtogal ah inay yihiin kuwa ugu caansan ee ku jira OPPO A11. Nooca Shiinaha ayaa adeegsanaya afar dareemayaal qeybtiisa dambe, oo leh 12 MP dareeraha ugu weyn kiiskan, kaas oo laga yaabo inuu siiyo dareenka inuu yahay mid suubban, laakiin si fiican ayuu u shaqeeyaa Iyada oo ay weheliso dareerahaan waxaan ka helnay xagal ballaaran oo 8 MP ah, a 2 mm sensor sensor iyo dareeraha afraad, oo u muuqda mid loogu talagalay xasilinta. In kasta oo ujeeddada dareemahan afaraad ee taleefanka aan si cad loo sharxin. Kaamirada hore hal 8 MP sensor ayaa loo isticmaalaa markan.
Bateriga ayaa ah dhinac kale oo caan ah oo ka dhex muuqda bartanka. Shirkaddu waxay dooratay batari dhan 5.000 Mah karti, taas oo shaki la’aan ina siin doonta ismaamul wanaagsan. Markaa waa ikhtiyaar wanaagsan kuwa isticmaala ee raadinaya taleefan siiya madax-bannaanida ku filan si ay u adeegsadaan maalinta oo dhan iyada oo aan wax dhibaato ah. Dareeraha sawirka faraha ayaa ka muuqda muuqaalkan 'OPPO A11', markan oo ku yaal dhabarkiisa, booska caadiga ah ee dhex-dhexaadka ah ee Android. Sida nidaamka qalliinka, waxay la timaadaa Android Pie, oo ay weheliso lakabka astaanta Color OS 6.
OPPO A11 waxaa horey loogu soo bandhigay ShiinahaXaqiiqdii, mar horeba waa suurtagal in laga iibsado qadka dhexe ee dalka. Ilaa hadda waxba lagama sheegin sii deyntiisa caalamiga ah. Telefoonada sumaduhu waxay helayaan joogitaan caalami ah, sidaa darteed waxaa laga yaabaa in laga furo meel ka baxsan Shiinaha, laakiin waa inaan sugnaa intaan ka ogaano.
Markii laga bilaabay Shiinaha, taleefanku wuxuu ku yimaadaa hal nooc oo RAM ah iyo keydinta. Waxaan kala dooran karnaa seddex midab oo kala duwan, kuwaas oo ah buluug, cadaan iyo midab buluug ah. Qiimaha tan OPPO A11 ee Shiinaha waa 1.499 yuan, in isbedelku yahay 192 euro. Haddii laga bilaabo Yurub, qiimaheeda ayaa xoogaa ka sarreyn doona, laga yaabee inuu ku dhow yahay 249 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OPPO A11: Nooca cusub ee bartamaha
Google wuxuu furayaa furaha amniga Titan USB-C oo leh Yubico